Himalaya Dainik » ज्योतिष बाजे बनेर हात हेर्न बस्दै, युवती फसाउँदै…
अहिले सामाजिक क्षेत्रमा बिभिन्न प्रकारका नकरात्मक गतिबिधि हुदैँ गएका छन् । काेहिले ब ला त्कार गरेका छन् भने कसैले कुनै न कुनै लाप-रबाहि गरेकै छन् । जब ठगहरू ‘गुरुबा’ बन्छन्, व्यभिचारीहरू ‘बाबा’ बन्छन्,धू-र्तहरू ‘माता’ बन्छन्, दुःखी र चिन्तितहरू ठगिन्छन् र लुटिन्छन् ।
सुन्धाराको आकाशेपुलमुनि साँघुरो सटर–कोठामा छ, ‘शिवशक्ति ज्योतिष फलादेश केन्द्र’ ।
दिउँसोको साढे ३ बजे केही महिलामात्र‘ज्योतिष’बाट उपचार पाउन बाँकी थिए । दिनहुँ महिलाको भीड लागिरहने यस केन्द्रमा आफूलाई प्रख्यात ज्योतिष बताउने टीका योगी कुँवरले ‘ज्योतिष सेवा’ दिइरहेका थिए । लामो चुल्ठो पालेका उनले एउटा कुर्सीमा आफ्ना गोडा बिसाएर नजिकै स्टुलमा एक अधबैँसे महिला राखेका थिए । महिलाको कपडाभित्र उनका दुवै हातसल-बलाइरहेका थिए । ती महिलापछि एक किशोरीको पालो आयो । उनको पनि कपडा छिचोलेर पेटतिरबाट ज्योतिषका हात स-लबलाउन थाले । ती किशोरी का-उकुतीले भु-तुक्क भइन् ।
‘के का-उकुती मान्या, मोरी’ भन्दै टीकाले गाला चिमोटे । पालो कुरिरहेका अन्य महिलासँग ठट्टा गर्दै उनले आफ्नो काम जारी राखे ।अर्की छोरी समाएर बसेकी ती किशोरीकी आमा छेउमै थिइन् । किशोरीलाई चण्डीमा हात राख्न लगाएर कसम खुवाए ज्योतिषले, ‘अबदेखि बुवासँग रि-साउन्न । ठूलाले भनेको मान्छु । नराम्रो संगत छोड्छु…।’त्यसपछि उनले किशोरीलाई कम्मरमा बुटी बानिदिए। र, शुल्क लिए, एक हजार रुपैयाँ ।
’‘डाक्टरकोमा धाउँदाधाउँदा हैरान परेर उहाँकोमा आएकी छु,’ उपचार गराउने एकमहिलाले भनिन्, ‘मलाई त डाक्टरको भन्दा गुरुबाको उपचारमा विश्वास लाग्छ।
आधा घण्टाको बीच उनले चारपाँच जना महिलासँग यही प्रक्रिया दोहो¥याए । ‘मैले गाउँमै ज्योतिषविद्या पढेको हुँ,’ उनले शुक्रवार संवाददातासँगगाह्रो मानेर कुरा गरे, ‘यहाँ केन्द्र खोलेको १४ वर्षभयो । धेरै विधि हुन्छन् ज्योतिष उपचारका । धेरैले विश्वास गरेर त अहिलेसम्म टिकेको छु । दिनमा कहिलेपाँच सय त कहिले पाँच हजार रुपैयाँ कमाइन्छ । धेरैलाई निको पारिसकेको छु ।’उनको यो केन्द्रमा धाउने अधिकांश महिला हुन्छन् ।
अस्पतालमा बिरामीको जत्तिकै त्यहाँ पनि लामै लाइन बस्नुपर्छ । ‘डाक्टरकोमा धाउँदा धाउँदा हैरान परेर उहाँकोमा आएकी छु,’ उपचार गराउने एक महिलाले भनिन्, ‘मलाई त डाक्टरको भन्दा गुरुबाको उपचारमा विश्वास लाग्छ।
उहाँको झारफुकले पी’डा कम भएको छ ।’‘से-क्समार्फत उपचार’नयाँबानेश्वरस्थित संविधासभा भवनको सीधा अगाडि छ,महाकाली ज्योतिष तथा हस्तरेखा विज्ञान केन्द्र । यसका सञ्चालक हुन्, आफूलाई चर्चित युवा ज्योतिष र ज्योतिषविद्यामा विद्यावारिधिको उपाधि पाएको बताउनेहरि खरेल । सधैँजसो मान्छेहरूको भीडभाड भइरहने यो केन्द्र केही दिनदेखि बन्द छ ।
उनका कु-कृत्यहरू सार्वजनिक भए । विभिन्न रोगको उपचारका लागि आफूकहाँ धाउने महिलालाई ‘मसँग सम्भो’ग गरेमात्र तपाईंको उपचारसफल हुन्छ’ भन्ने सल्लाह दिएर आफ्नो यौ’नप्या’स पनि मेट्ने र पैसा पनि कुम्ल्याउने ज्योतिष हुन् उनी । केही सञ्चारमाध्यममा उनको शो’षण सार्वजनिक भएपछि उनी अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन् । केन्द्रको बोर्डमा लेखिएको छ, ‘कम उमेरमै देशविदेशमा प्रसिद्धि कमाउन सफल ज्योतिष हरि खरेलबाट मा-नसिक रोग, दम, हातगोडा नचल्ने,बाथ, सुगर, महिलाको मा-सिक गडबडी,से-तोपानी बग्ने, कम्मर दु’ख्ने बि’रामीको उपचार ।
पुजनले भने, ‘ज्योतिषले मेरी श्रीमतीलाई ‘मसँग से’क्स गरेमात्र बच्चा हुन्छ’ भन्न थालेपछि हामी पछि हटेका हौँ ।’
’देशविदेशका राजनेता, कलाकार, गायिका, नायक–नायिकाको ग्रहफल हेरिसकेका भनेर आकर्षक विज्ञापन पनि गरिएको छ । बाँ’झोपनको उपचारमा भौँतारिइरहेका पुजन (नामपरिवर्तन) को जोडी ज्योतिष खरेलसम्म पुग्यो ।‘पहिला त धेरै रिंगाए हामीलाई पनि । कहिले ग्रहदशा शान्त गर्ने, कहिले पूजाआजा गर्ने त कहिलेदान गर्ने भनेर धेरै खर्च गराए,’ पुजनले भने, ‘ज्योतिषलेमेरी श्रीमतीलाई ‘मसँग से’क्स गरेमात्र बच्चा हुन्छ’ भन्न थालेपछि हामी पछि हटेका हौँ ।’
उनका अनुसार ज्योतिष खरेलले आफूसँग स-म्भोग गरेको तीन वर्षभित्र बच्चा जन्मने आश्वासन दिएका थिए । धेरै महिलाहरूले उपचार सफल हुने विश्वासमा खरेलले भने अनुसार गरेको पुजनले बताए । ‘यस्ता पाखण्डी ज्योतिषलाई देखाएर के होला भनेर त्यसपछि हामी त्यहाँ जानै छोड्यौँ,’ उनले भने । पी’डितहरूको जानकारीका आधारमा सम’स्या समाधानको पहल गरिरहेको बताए, वैदिक सनातन हिन्दू परिषद् संस्थागतसंघर्ष समितिका उपाध्यक्ष रामेश्वर थापाले ।‘हरि खरेलबाट पी-डित भएकाहरूको आग्रहमा हामीले यो पहल थालेको हौँ,’ उनले भने ।
खरेलले आफूमाथि लागेका सबै आ’रोप स्विकारेको र सुध्रने मौका मागेको उनले जानकारी दिए । ‘उनका दुई श्रीमतीसमेतलाई राखेर छलफल गर्दा खरेलले माफी माग्ने र अबदेखि त्यसो नगर्ने बताएका छन्,’थापाले भने । उनका अनुसार ज्योतिष खरेलले लामो समयदेखि उपचारका नाममा महिलाहरू सँग शारी’रिक सम्प’र्क गर्दै आएका थिए ।
‘विदेशमा श्रीमान् भएका श्रीमतीहरूलाई एक्लोपन हटाइदिने, कसैलाई जोडी मिलाउने त कसैलाई श्रीमान्–श्रीमती छुटाइदिने सम्मका आश्वासन दिँदा रहेछन्,’ उनले भने । धर्मको खोल ओढेर मनपरी भ्र-म सिर्जना गर्ने खरेलजस्ता व्यक्तिले ज्योतिष विज्ञानर हिन्दू धर्ममै ग-म्भीर आ-घात पुगेको थापाको ठहर छ । राष्ट्रिय ज्योतिष सेवा समितिका महासचिव विश्वप्रेम भट्टराईले भ्र मको खेती गर्ने ज्योतिषहरू देशव्यापी छरिएको बताए ।
‘आफूलाई ज्योतिषबताउने यस्ता झुण्ड देशैभरि फैलिएका छन्,’ उनले भने,‘राज्य तथा नागरिकका स्तरबाट थप कदम नचालिए समाजमा विकराल समस्या आउन सक्छ ।’ललितपुर, पाटन, बंगलामुखीमा ग्रहदशासँगै हरेक खाले रो-ग निको पारिदिने लेखिएको एउटा बोर्ड देखिन्छ। महिलाको से’तोपानी बग्ने, पा-ठेघर खराबी,बाँ’झोपनलगायत थुप्रै रो’ग निको पारिदिने सूचनासहितको साइन बोर्ड हेरेर त्यहाँ छिर्ने धेरै हुन्छन्।
सो बोर्डमा लेखिएका ज्योतिष कमलप्रसाद घिमिरे (शर्मा) आफू ज्योतिषविज्ञ नै भएको दाबी गर्छन् । ‘महिलाको सेतोपानी बग्नेसमस्या १५ दिनको औ’षधि खाए चैट् पारिदिन्छु,’उनले भने, ‘बाँझो-पनको त ग्यारेन्टी दिएर औ-षधि गराउँछु । से तोपानीको उपचारका लागि १५ सय र बाँ’झोपनका लागि २५ सय जति ख’र्च लाग्छ ।
’बच्चा हुन नसकेका कुनै पनि महिलालेपहिलो महिना तीन दिन र दोस्रो महिना चारदिन औषधि खाए ग’र्भ रहने उनको दाबी छ ।‘कति जनाको सफल भइसक्यो,’ उनी आफूले नसक्ने उपचार सायदै भएको दाबी गर्छन् । बाँ’झोपनको उपचारको पछि लाग्दा सामाखुशी बस्नेरीता (नाम परिवर्तन)को वैवाहिक जीवनमै पूर्णविराम लाग्यो । विवाह गरेको तीन वर्षसम्म सन्तान नभएपछि उनी साथीको सल्लाहमा आफूलाई ठूलो ज्योतिष बताउने ज्ञानकुण्डबाबा कहाँ पुगेकी थिइन् ।
रीताको पूरै अवस्था बुझेपछि उनले टाढाबाट नातेदार पर्नेसँग विवाह गरेकाले ‘वंश’मा समस्या भएको बताए । हुनपनि त्यस्तै थियो, टाढाबाट दाजु नाता पर्नेसँग विवाह गरेर धादिङबाट भागेर काठमाडौँ आएकी थिइन् उनी ।त्यसपछि ती बाबाले ‘साधुसँग सम्’भोग’ गरेमात्रै कोखभरिने उपाय बताइदिए । भागी विवाहका कारण परिवारबाट एक्लिएकी उनी कुनैपनि हालतमा बच्चा चाहन्थिन् । उनले त्यस्तै गरिन् ।ती बाबासँग सम्भो’ग गरेको दुई महिनासम्म पनि ग-र्भ नबसेपछि फेरि उनैकहाँ गइन् ।
बाबाले सात दिनसम्म त्यस्तो गर्नुपर्ने बताएपछि उनी तयार भइन् । एकदुईदिन लुकीछिपी भए पनि चौथो दिन रीताका श्रीमान्ले चाल पाए । उनको पिछा गर्दैजाँदा बाबासँग सम्भो’गका लागि तयार भएको अवस्थामा भेटे । बाबालाई रग’तप’च्छे हुनेगरी पि’टेर रीतालाई फिर्ता ल्याएका उनले केही दिनमै उनीसँग स’म्बन्ध वि’च्छेद गरे । अहिलेती बाबा त्यो ठाउँबाट फरार छन् । रीता नयाँ बसपार्कको एकहोटलमा भाँडा माझ्छिन् । फुटपाथै भरि ‘ज्योतिष’२० वर्षीय दिवाराम गिरी भारत, आन्ध्रप्रदेशबाट काठमाडौँ आएको दुई वर्ष भयो ।
रत्नपार्क,सुन्धारा क्षेत्रका फुटपाथमा बसेर ज्योतिष कर्म गर्नेउनी आफूलाई ज्योतिष विद्याको पूरै ज्ञानभएको बताउँछन् । ‘मैले धेरै बि’रामीलाई सञ्चो पारिसकेँ,’ उनले दाबी गरे, ‘सन्तान नजन्मेकालाई पनि उपचार गर्न सकिन्छ ।’उनी ग्रहशान्ति गर्ने र भाग्यरेखा हेर्ने काम पनि गर्छन्। तर, धेरै आम्दानी बाँ’झोपनको उपचारबाट हुन्छ ।बाँ’झोपनको उपचारका लागि शिवलिं-गीजस्तो देखिनेसाना सातवटा दाना फलफूलमा हालेर सात दिनसेवन गर्नुपर्ने उनको तरिका छ ।भारतबाटै आएका रिझनलाल यहाँ ज्योतिष काम गर्नलागेको १३ वर्ष भयो ।
‘यहाँका धेरैले हामीलाई विश्वास गर्छन्,’ उनी दंग छन्, ‘जागिर नपाएका,विदेश जान लागेका केटाकेटी त झन् धेरै विश्वासगर्छन् ।’ उनको दैनिक कमाइ कति होला ? ‘कहिलेपाँच सय त कहिले पाँच हजार पनि हुन्छ । फिक्स हुन्न,’उनले भने । उनका अनुसार न्युरोडको सं’कटा मन्दिरछेउछाउमा मात्र भारतबाट आएका ३५ जना ज्योतिषछन् ।
‘हामी सबैलाई ज्योतिष ज्ञान धेरै छ,’नेपालीको भाग्य र भविष्य बताउन आफूहरू माहिररहेको समेत उनी दाबी गर्छन् । सुरुमा ‘भेटी चढाउनुस्’बाट सुरु हुने उनीहरूको ज्योतिषविद्या अन्तिममा ‘इमो’सनल ब्ल्या’कमेलिङ’सम्मपुग्दा हात देखाउनेको गोजी रित्तिसकेको हुन्छ ।सं’कटा मन्दिरकै छेउमा ज्योतिष काम गरेर भारत,बिहारमा तीनतले घर बनाइसकेको बताउने चिन्डीमोहन ४५ वर्षका भए ।
‘घरमै सिकेको हो ज्योतिष,’ उनले भने, ‘नेपालमा कमाइराम्रो हुन्छ । धेरैले विश्वास गर्छन् ।’ उनलेग्रहदशादेखि सबै रोगको उपचार गराउनेजिम्मा लिन्छन् ।माताका प्रपञ्च काठमाडौँ, तीनकुनेकी सुनीता शाह हुनेखाने परिवारकी हुन् ।उनी श्रीमान्की दो’स्री श्रीमती हुन् । श्रीमान्ले थुपारिदिएको सुनलगायत धनमाल प्रशस्त थियो उनीसँग । उनको चि’न्ताको विषय नै त्यही थियो, ‘यत्रो धनमाथि कसैले आँखा गा ड्यो भने के होला ?’ त्यसैबेला उनको चिन्तामा घिउ थपिदिने एकमाता प्रकट भइन् । माताकै भेषमा प्रकटभएकी भारतीय मूलकी ती महिलाले हात हेरिदिइन्सुनीताको ।
‘तपाईंलाई ग्रहले घेरेको छ । त्यसैले धनसम्पत्ति शुद्ध गर्नुपर्छ,’ माताले कान फुकिहालिन् ।सुनीतालाई पनि सम्पत्ति शुद्ध बनाउने मौका यही हो भन्ने लाग्यो । दराज र सुटकेसमा सुरक्षित गरिएका भएभरका गरगहना, पैसा,लालपूर्जा ल्याएर शुद्ध पार्नमाताको जिम्मा लगाइदिइन् । माताले रचेको प्रपञ्च सफल हुँदै थियो । सानो थैलोमा भरिएको माटोमा सुनीताको ‘सम्पत्ति’हालेर चारैतिर चलाइन् ।
मन्त्रले कोठा गुञ्जायमानथियो । सुनीता मख्ख थिइन् ।आधा घण्टापछि माताले थप उपाय बताइन् । ‘अबयो थैलो भोलिसम्म नखोल्नुस्,’ माता भोलि आउनेभनेर त्यहाँबाट निस्किइन् । भोलिपल्टमाटो भरिएको झोला खोल्दा त दुइटा ढुंगा र लालपूर्जा मात्र । कतिबेला आँखा छलेर मातालेनौ तोला सुन र दुई लाख रुपैयाँ नगद उछिट्याइन्,सुनीताले पत्तो पाइनन् ।
तथाकथित माताकै विश्वासमा परेर २० लाखको हिराको हार गु माइन्,नयाँबजारकी विद्या खत्रीले । उनले पनि शुद्ध गर्नेनाममा मातालाई जिम्मा लाएको हार सुनीताकैजसरी एकैछिनमा विलीन भयो ।‘चामलको झोलामा हालेर झोला नैजिम्मा लगाइन्,’ विद्याले भनिन्, ‘त्यो हार तकतिबेला आफ्नो झोलामा हालिछिन्, पत्तै पाइनँ ।मलाई त भाउन्न भयो ।’ जुनझोलामा हालेको त्यही झोला जिम्मा लाएपछि विश्वासगरेको उनले बताइन्, ‘सबै बि त्यास पारिन् नि ।’दाइजोमा पाएको हार माताले लु’टेपछि अहिलेघरमा बि’तण्डा म-च्चिएको उनले बताइन् ।
सामाखुसीकी इच्छा गुरुङको कोठामा चो’री भयो ।ल्यापटप, आइफोन, पैसा सबै चोरिएपछि उनलेप्रहरीमा उजुरी गरिन् । तर, प्रहरीले चासो दिएन ।त्यसपछि उनी मनमैजुकी प्रख्यात भनिने एकमाताको ‘आश्रम’मा पुगिन् । ‘मातालेहातमा कालो धुलो दलेर हेर्न लाउँथिन् र त्यसमा चो’रीको सबै दृश्य देखिन्छ, ध्यान दिएर हेर भन्थिन्’, इच्छा भन्छिन्, ‘मैलेकेही नदेखेपछि मेरो बहिनी, साथी धेरैलाई हेर्न लगाइन् । कसैले देखेनन् ।’
नदेखिएपछि माताले ‘आज ग्रहमिलेन, भोलि आउनू’ भनिन् । भोलिपल्ट उनलाईबुटी बाँध्न लगाएर हेराइयो ।बुटी लाउँदा पनि नेदेखिएपछि माताले इच्छाको ग्रहदशा खराब भएको सुनाइन् । कुरा गर्दैजाँदा इच्छाले आफू रो गी भएको बताइन् । मातालेरोग निको पार्ने दाबी गर्दै अनेक रीतिरिवाज गर्न लगाइन् । तिए‘चोर समाला कि भनेर माताकोमा गएकी थिएँ,’ उनले भनिन्,‘चोरको कुरा छोडेर माता त मेरो रोगनिको पार्नतिर पो लागिन् ।
पन्ध्र÷बीस हजाररुपैयाँ सकिएपछि जान छोडेँ ।’ माताको भेषमा ठ-गी गर्ने र बाबाको भेषमा यौ’नप्या’स मेटाउनेहरू हाम्रो गाउँ–शहरमा थुप्रै छन् ।दुः’खमा परेर रन्थनिएका र अन्ध-विश्वासी मानिसउनीहरूको शरणमा पर्ने गरेका छन् । बाबा रमाता भनाउँदाले भने ज्योतिषविद्याका नाममा दुनियाँलाई लु’टिरहेका छन् ।‘ज्योतिष पेशा नै बदनाम पारे’ज्यो. विश्वप्रेम भट्टराई महासचिव, राष्ट्रिय ज्योतिष विज्ञानसेवा समितिखगोलीय अवस्थालाई अध्ययन गरी जन्मकाल रवर्तमान समयको आकलन गरी त्यसबाट निस्कने फलबताउने व्यक्ति हो, ज्योतिष ।
डाक्टरलाई जसरी ज्योतिषलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले तकेही काम पाएन भने पिताम्बर (पहेँलो कपडा) रटीका लगायो, भयो ज्योतिष ।
ज्योतिषविज्ञानका तन्त्र, मन्त्र, शक्ति, ग्रहगणनलगायत धेरैविद्या छन् । बिरामीको उपचार गर्ने पाटो पनि छ। तर, त्यसका लागि धेरै अनुभव, साधना, ज्ञान रविद्वता चाहिन्छ । सडकमा बसेर हात हेरेर, पेट छामेर,फुकफाक पारेर उपचार हुन सक्दैन ।अहिले ज्योतिषविद्याका नाममा सडक, गल्ली र चोकचोकमा अ-पराध भइरहेका छन् ।
सम्बन्धित निकायले चासो दिएका छैनन् । यसमा मापदण्डको अभाव छ । डाक्टरलाईजसरी ज्योतिषलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले तकेही काम पाएन भने पिताम्बर (पहेँलो कपडा) रटीका लगायो, भयो ज्योतिष । यसलेगर्दा हाम्रो पेशा नै ब-दनाम भइसक्यो ।कर्म-काण्ड र ज्योतिषशास्त्र फरक कुरा हुन् । पुरोहितवाद भनेको भ्र मको खेती हो ।ज्योतिषको मुख्य क्षमता भनेको समयसूत्र रकालज्ञान हो ।
हिजो, आज र भोलि बताउन सक्नेहुनुपर्छ ज्योतिष । शक्ति र साधनाले सूर्यको अध्ययनगर्न सक्नुपर्छ । ग्रहगणनाका लागि गणितमा पोख्तहुनुपर्छ ।बाँ’झोपनको उपचार गर्ने ज्योतिष होइन । यो त चिकित्सक र वैद्यराजको काम हो । ज्योतिषविज्ञान त कालको हुबहु साक्षात्कार गर्ने क्षेत्र हो । ग्रह र प्रकृतिको अध्ययन गरी केही सामान्य उपचार सफल हुन सक्छ । तर, ‘सबै ठीक पार्छु’ भन्नु पाखण्डबाहेक केही होइन ।वैद्यराज, डाक्टर र ज्योतिषको समन्वय हुनुपर्छ । एकलेअर्काको अस्तित्व स्विकार्नुपर्छ ।
वनस्पति र चिकित्सा विज्ञानलाई ज्योतिषले हेर्ने ग्रहचरआवश्यक हुन्छ । ग्रहको गोठालो हो, ज्योतिष ।पहिलाका ऋषिमुनिले गरेका स-म्भोग गरेर उपचार हुनेपद्धति अब कथामा सीमित छन् । उनीहरूले जसरी मैलेपनि सक्छु भन्नु व्यभिचार हो ।अहिलेको समयमा यो शारीरिक शो-षण हो, अप’राध हो । हरि खरेलजस्ता अ’वैध कर्म र झु-टका खेतीसम्बन्धी धेरै केस मैले सुन्न र देख्न पाएको छु ।दुः’ख लाग्छ, यस्ता कुरा देख्दा र सुन्दा ।
मैले मात्रगरेर सक्ने यहाँ केही छैन । म त ज्योतिषको एउटा संगठनको पदाधिकारीमात्र हुँ ।धेरै छन् यस्ता संगठन । राजनीतिक दलले सदस्यता दिएजस्तो त हो नि, यो पनि । जसले पनि पाउन सक्ने ।यस्ता झुण्डहरूले पेशालाई नै बदनाम पारिसके । अब शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । एक लाखजति ज्योतिष भनिने व्यक्ति नेपालमा छन् । त्यसमा पाँच हजारमात्रसच्चा ज्योतिष होलान् । हुन त सर्टिफिकेट नै किन्न पाइन्छ अहिले ।
जीवनभर अध्ययन, अनुसन्धानगरी विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाईयस्ता खबरले सास्ती दिइसक्यो ।स-म्भोग गरेर निको हुने सुनेर त्यसो गरिदिन आग्रह गर्नेहरू पनि आउँछन् । खबरदार, ज्योतिषबाट काम-वासनाको आश नगर्नुस् । यसबाट उपचार हुनेकुरो असम्भव छ ।एकजना मात्रै ज्योतिषको विश्वास नगर्नुस् ।शास्त्रमै पढ्नुपर्छ, घटीमा चार जना ज्योतिषले सँगै बसेर निर्णय लिनुपर्छ ।
नेपालमा एउटा साझा केन्द्र,जुन सबैलाई मान्य होस्, को खाँचो छ ।कहिलेकाहीँ हचुवामा गरेको उपचारले धेरैलाई प्रभावित गर्छ । त्यो त मा-नसिक शान्ति मात्र हो । त्यो दिगो हुँदैन । धामी-झाँक्रीले गरेजस्तो काम हो त्यो । अहिले त पैसाको बलले यस्ता महाराज, उस्ता गुरु, सर्वोच्च व्यक्ति भनेर भ्र-म फैलाइन्छ । शास्त्रलाई नै आ-घात पारिरहेको सबै ले टुलुटुलु हेरिरहेछौँ । यहाँ त त-स्करी गर्ने ज्योतिषपनि छन् ।